Alahady 27 Octobre 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 27 OKTOBRA 2019
Alahadim-bokatry ny Sampana Fifohazana
« Jesosy namaly ka nanao taminy hœ: Ravao ity tempoly ity, ary amin'ny hateloana dia hatsangako indray izy. » (Jaona 2:19)
Mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra hoe “Maniria ny haminany” isika izao alahady faran’ny volana Oktobra izao sady alahady ivom-bokatry ny Sampana Fifohazana. Ny filohan’ny Sampana Andrianary Rado no nitarika ny fotoana ary ny mpitandrina Andrianomenjanahary Narivelo Nirina avy ao amin’ny Fjkm Ambohimarina Faharetana no nitondra ny hafatra.
Ny hira fanevan’ny faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM no noredonina teo am-panombohana ny fotoana ary dia noharahabaina ny Mpitandrina vahiny hitondra ny hafatra.
Ny Salamo Fiderana niarahana namaky dia noraisina tao amin’ny Salamo 108 1-5 ary ny hira SAFIF 345 :1-3 “Andriamanitra ô!” no nohiraina avy eo.
Tao amin’ny vavaka fiderana sy fisaorana dia nanome voninahitra ny Tompo sy nisaotra ny mpitarika noho ny fitahiana sy fahafahana manatrika ny fotoana. Nangataka ny Fanahy Masina handraisana fampaherezana avy Aminy.
Ny mpampianatra K10A Andriamasinoro Erika no nitarika ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Vavaka fohy no nanombohany izany ary ny Salamo 46:1 no Teny nangalany ny fampianarany. «Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. » (Salamo 46:1) ary niarahana novakiana. Tantara fohy no natolony. Ny 31 marsa 2014 tany Atlanta, tany Amerika Avaratra, dia nisy naka an-keriny ny zazalahy kely Willy Mairick ary tsy navely niteny saingy tsy nanaiky izy fa nihira mafy be. Nandritra ny adiny telo dia nihira ny hira hoe “ Ny dera rehetra dia ho an’Andriamanitsika ! ”. Leo be ireo naka an-keriny dia novotsorany ka nalefany I Willy. Lasa nalaza be I Willy sy ilay hira nataony izay lasa hira gospel. Rehefa nanontaniana I Willy dia nilaza fa mahalala an’Andriamanitra sy tia an’i Jesoa ary tia miangona sy mamaky Baiboly. Tsinontsiona aho hoy izy fa ankizy tsotra fotsiny fa Andriamanitra no iankinako.
Isika Sekoly Alahady koa dia tokony ho toy izany ary tsarovy fa tian’Andriamanitra isika ary azo antsoina Izy. Naverina novakiana ilay andinin-tSoratra Masina dia mbola nivavaka izy avy eo. Nofaranany tamin’ny fanentanana ny ankizy hanatrika ny fianarana hira krismasy isaky ny alahady hariva amin’ny 3ora hatramin’ny 4 ora.
Ny hira Safif 326/1-2 “Aza avela ho mandalo re ny Teny” no noredonina avy eo. Ramananjoelina Patricia no nanao ny vavaka ary Rakoto Hajaniaina Ginot no namaky ny Tenin’ny Soratra Masina. Ny Perikopa androany dia ny Amosa 3 :1-8, Jaona 2 :18-22 ary Asan’ny Apostoly 2 : 14-21. Ny hira SAFIF 70/1-2 “Ry Fanahy Masina ao ambony” no nohiraina avy eo.
Niarahaba ny Fiangonana Amparibe Famonjena ny Mpitandrina, ary niarahaba manokana ny SAFIF.
Noraisiny tao amin’ny Jaona 2:19 ny Teny notoriana. Niarahana namaky izany : « Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Ravao ity tempoly ity, ary amin’ ny hateloana dia hatsangako indray izy. »
Ny filazantsaran’i Jaona dia manasongadina ny fisian’ny paska telo natrehan’i Jesoa. Ny Sampandrofia no paska voalohany(fanadiovana tempoly.
Isaky ny toko dia mitombo ny fifanoherana misy eo amin’i Jesoa sy ny mpitondra fivavahana jiosy. Ny jiosy tena sarontiny ny amin’ny tempoly izay toerana masina tsy azo vingavingana. Noravana anefa izany tempoly izany satria tsy sitrak’Andriamanitra.
Eto amin’ity Jaona 2:19 ity dia Jesoa no tempoly fa tsy ny tao Jerosalema izay nahasarontiny ny mpitondra fivavahana.
Zavatra telo no maha tempoly an’i Jesoa :
– Ny vatan’i Jesoa dia azo oharina amin’ny nanorenana ny tempoly. Na i Jesoa na ny tempoly dia mariky ny fanatrehan’Andriamanitra : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia ao afovoany Aho. » (Matio 18:20). Zava-dehibe ny fanatrehana fanompoam-pivavahana satria manatrika Andriamanitra
– Jesoa na tempoly dia misy ampisiana mazava ny fisiany. Ny synagoga dia azo anaovana fanompoam-pivavahana fa ny tempoly kosa dia hanaterana fanatitra. Jesoa dia nanao ny tenany ho fanatitra ka izany no mampitovy Azy amin’ny tempoly.
– Na Jesoa na ny tempoly dia hanatanterahana fanompoam-pivavahana. Izany no handehanana any am-piangonana. Ny fivavahana tsy misy anaran’i Jesoa Kristy dia tsy henoin’Andriamanitra.
Ny vatan’i Kristy dia nanpitahaina amin’ny tempoly noho ny fahamasinany. Ny fahamasinan’i Jesoa Kristy no ifantohana fa tsy ny olona na ny ataon’ny olona. Mila mitafy fahamasinana isika
Ny fandravana tempoly dia ny famonoana an’i Jesoa Kristy. Ka tokony handini-tena isika. Izay miverina ao amin’ny ota dia mpandrava tempoly, mamono an’i Jesoa (mandrava amin’ny alalan’ny fihetsika, ny fiteny)
Raha nandrava tempoly Jesoa dia nadrava ny fombafomba ivelany.
Jesoa Kristy dia manatrika anao aminny alalan’ny Fanahy Masina.
Noravana ny rafim-pivavahana misy sorona. Tsy mety intsony izany fa fanaovana tsinontsinona ny ra nalatsak’i Jesoa izany
Any amin’ny tany maizina no misy karazana sorona samy hafa.
Nisehon’ny devoly i Lotera, nasehony ny lisitry ny ota nataon’i Lotera ka hoy izy hoe efa nodiavin’ny ran’i Jesoa Kristy ny otany. Nandositra satana.
Mahadio ny ran’i Jesoa Kristy. Raha matoky ny sorona nataon’i Jesoa Kristy sy ny fandravana tempoly ianao dia tena voavela heloka ianao, raha tena marina ny fibebahana ataonao. Ny tempoly Jiosy rava dia tsy tafatangana intsony
Nanova ny trano ho tempoly olona i Jesoa Kristy.
Eto an-tany tsy misy maharitra mandrakizay, fa ny vatan’i Jesoa Kristy tsy ho levona mandrakizay.
Tsy Jesoa Kristy irery intsony no tempoly fa ny kristiana rehetra (tempolin’Andriamanitra velona)
Rehefa manaiky ny handray an’i Jesoa Kristy dia azo antoka fa mahazo ny fiainana mandrakizay.
Ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty dia tombony ho anao koa koa mifikira aminy satria ny fitsanganana amin’ny maty no famonjena.
Tao amin’ny vavaka fifonana dia nambaran’ny mpitarika fa tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra raha nihaino ny hafatra teo. “ Mazava ny Teninao, tia anay Ianao ary tsy mitsahatra manome fahazavana mba hitoeranay marina amin’ny finoana Ianao. Tsy tanteraka amin’izany izahay fa izay tianay ihany no niainanay. Eny amin’ny alehanay dia tsy miombona aminao tanteraka izahay. Ny teny, ny fomba , ny toetranay dia hoatran’ny manao tsinontsinona Anao izahay ! Tsy mijory vavolombelona izahay manoloana ny ady sy olana atrehanay fa mitototo mitady zava poana. Manoloana izany dia menatra sy mangaihay izahay ary mifona. Jesoa dia tia, manapaka ary mamonjy ka sahy manao izao vavaka izao izahay. Matoky izahay fa navelanao ny helokay. Amen”
Ny hira SAFIF 105/3 “Aoka izay ny ditra atsaharo” no hira fifonana natao avy eo.
Teny famelan-keloka dia noraisina tao amin’ny Jeremia 31:3 « Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. » Izaho tsy hahafoy na handao anao hoy ny Tompo, tena tia anao Jesoa. Ny hira Ffpm 480/1-3 “ Mamy ny foko ry Jesoa ô “ no nohiraina avy eo.
Ho an’ireo matoky marina fa voavela heloka dia ny fanekem-pinoana laharana faha 4 no notononina.
Zoky Yasmina mpitantsoratry ny SAFIF no namaky ny tatitr’asan’ny Sampana avy eo ary nampahatsiahy ny vinan’ny Sampana dia ny fitoriana ny Filazantsara sy ny tanjona dia ny fampaherezana ny olona rehetra. Nampahafantarina ny asa anatin’ny sampana : fivoriambe, fivoriana, ny asa fampaherezana atao, ny fiaraha-miasa amin’ny sampana hafa : Dorkasy, Tily sy Mpanazava, ny herinandrom-bokatra,… Ny mpikambana rehetra ao amin’ny Sampana Fifohazana dia niara-nanao ny hira Safif 144 “”Iza vahiny malala” avy eo.
Niroso tamin’ny asan’ny Fiangonana avy eo ka ny mpitantsoratry ny Fiangonana Razafimaharo Mamy no nanolotra izany.
Ny Toera-panomanana Mpitandrina Ambatonakanga dia nandefa taratasy fisaorana noho ny asa fanamboarana ny lavarangana simba natao tao amin’ny Séminaire Amparibe
Hisy ny fiofanana ho an’ny Biraom-piangonana, filohan’ny SSAA hatao ao ami’ny Fjkm Soavimasoandro ny 31 Oktobra.
Alahady hitrotrona ambavaka ny sampana Fifohazana ny anio sy alahadin’ny reformation manerana ny FJKM
Misy varotra asa-tanana avy any Fianarantsoa atao eo an-tokontanim-piangonana hanohanana mpitandrina misotro ronono
Nanomboka androany ny taom-pianarana vaovao eo amin’ny Sekoly Alahady
Amin’ny alahady heriny no hanokanana an’izy 32 mianandahy ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo
Manomboka androny ny fianarana ny fety krismasy
Nisy taorian’izay ny fanentanana nataon’ny Diakona Rabako Ralambonirina Jean Jacques solontenan’ny Vaomieran’ny fifandraisana momba ny fitsangatsanganana hatao ny Sabotsy 09 Novambra eny Ilaivola_Ivato. Hisy ny fiara iombonanana hihainga amin’ny 07:30 eto Amparibe. Ny saran-dàlana dia 1 000 Ar
Ny solontenan’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona dia nanentana koa momba ny fampitaovana (akanjo, fitaovana, vola,…) ny mpitandrina sy vadin’ny mpitandrina any amin’ny toera-panomanana Mpitandrina any Fianarantsoa. Samy manome izay foiny ao am mpandraharaha na mpiandry Tanana. Ny fihaingan’ireo iraka dia ny 18 Novambra.
Ny Mpitandrina Raharijaona raha nanao fanentanana dia nangataka ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay amin’ny varotra entana ho an’ny mpitandrina misotro ronono. Nanamafy izy ny amin’ny fotoam-bavaka hitondrana am-bavaka ny Katekomena Afaka amin’ny zoma 01 Novambra sy ny fanompoampivavahana ny alahady 03 Novambra izay hanomboka amin’ny 8:30. Nanentana koa izy ny amin’ny hitondrana am-bavaka ny fitsangatsanganana. Farany dia niarahaba ny tanora vao nanorina tokantrano ny Sabotsy teo izy dia Raharijaona Rasetamanana Solofonirina sy Ranaivosolo Valiha Harimalala.
Nisy taorian’izay ny fanolorana ny zaza Miaranirina Miantsa Alicia zanak’I Andrianirina Haingoniaiko sy Randriamiarana Lalao. Ny hira Ffpm 813/2 “Tia zaza” no natao tao anatin’izany.
Niroso tamin’ny rakitra sy Fanomezana avy eo sy ny famakiana ireo voady sy raki-pisaorana natolotry ny mpitahiry vola Ranaivoson Jacky. Ireto avy ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : Hiran’ny RFF Ampianaro aho, FF 47/1, FF 14/1, FF 37/1, Ffpm 462/1 FF 46/1 , Misaotra Anao zahay. Ny hira Safif 10/5 “Asandrato avo ry ny hiranao” no nanolorana ny rakitra.
Nanatanteraka ny anjara hirany ny RFF avy eo “Mihobia an’I Jehovah” .
Ny asa vavolombelona voalohany dia ny sakramentan’ny batisa dia ny zaza Rakotoarivelo Emma zanak’I Rakoarivelo Mamy sy Ngil Apsara.
Nisy avy eo ny asa sy fampaherezana niandraiketan’ny mpiandry ao amin’ny Sampana Fifohazana.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina avy eo nitondrany am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny Sampana Fifohazana, ny asa fitoriana ny Filazantsara, ny asa rehetran’ny Fiangonana ary ireo fangatahan’ireo nanao vavaka fangatahana sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Ny hira Safif 145/1-2 no natao mialohan’ ny famakiana ny tondronzotra sy nanolorana ny tsodrano ary ny andininy faha-4 amin’io hira io ihany no natao taorian’izay.
Nisy ny fivorian’ny ankatoky ny fandraisana avy eo .
Rajaonarison Lanto no teo amin’ny fanamafisam-peo, Rabako Tovohery no teo amin’ny fàfana elektronika, Randriambeloson Sitraka sy Rajaofetra Seta no teo amin’ny orga.
Naka ny sary : Ranaivoson Joël Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy sy Seta.